ရတနာသိုက် ရှာပုံတော် – ၅ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ရတနာသိုက် ရှာပုံတော် – ၅
ရတနာသိုက် ရှာပုံတော် – ၅
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Jul 24, 2012 in Creative Writing | 25 comments
ရတနာသိုက် ရှာပုံတော် – ၁၊ ရတနာသိုက် ရှာပုံတော် – ၂၊ ရတနာသိုက် ရှာပုံတော် – ၃၊ ရတနာသိုက် ရှာပုံတော် – ၄ တို့အား ရေးသား ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဖတ်ရှုလိုသူများ အနေဖြင့် လင့်ခ်ပေါ်တွင် ကလစ်ခ်နှိပ်ကာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါကြောင်း …..
ဦးခိုင် ဆိုသူ လူကြီးမှာ မောင်ဂီအား သေချာစွာ ကြည့်၍ “ဆွဲပြားလေးနဲ့ မောင်ရင့်ရဲ့ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ငယ်ကျွမ်းဆွေလေးကို အလဲအထပ် ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ရော သဘော ဘယ်လိုရသလဲ” ဟူ၍ မေးမြန်းလိုက်လေရာ မောင်ဂီ ဆိုသူ လူရွယ်မှာ အံ့သြသွားသည့်ဟန် ဖြစ်သွားပြီးနောက် ၎င်း၏ မျက်နှာ အမူအယာအား ပြန်လည် ချုပ်ထိန်းလိုက်ကာ “ကျုပ်ရဲ့ ငယ်ကျွမ်းဆွေ ဟုတ်သလား ဦးခိုင်” ဟူ၍ မသိဟန်ပြုကာ ပြန်လည် မေးမြန်း လိုက်လေ၏။
“ဟုတ်တယ် မောင်ဂီ၊ ပန်ပန် ဆိုတဲ့ အငြိမ့်သမလေးတစ်ယောက် ဘယ်ရောက်နေသလဲဆိုတာကို သိဖို့အတွက်နဲ့ ဟောဒီဆွဲပြားလေးကို ကျုပ်တို့ကို ပေးလိုက်ဖို့ဆိုရင် တန်ပါ့မလားနော့” ဟူ၍ ဦးခိုင် ဆိုသူမှ ကြောင်ကြီးဆိုသူဘက်သို့ လှည့်ကာ ခပ်ပြုံးပြုံး အမူအယာဖြင့် ပြောလိုက်လေရာ မောင်ဂီ ဆိုသူမှ “ခင်ဗျားတို့ ဆွဲပြားကို လိုချင်သပဆိုရင် ကျုပ်အနေနဲ့ ပေးလိုက်ဖို့ ဝန်မလေးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတို့ဘက်က ကိစ္စတစ်ခုကိုတော့ လုပ်ပေးရလိမ့်မယ်” ဟူ၍ ပြောလိုက်လေ၏။
ထိုအခါ ကြောင်ကြီးဆိုသူမှ “အဲ့ဒီ ကိစ္စဆိုတာ အငြိမ့်မင်းသမီးလေးနဲ့ ပတ်သက်လိမ့်မယ် ထင်တယ်” ဟူ၍ ပြောလေရာ မောင်ဂီမှ “အမှန်ပဲ ဦးကြောင်ကြီး၊ ပန်ပန်ကို ကျုပ်ဆီ အရောက် ခေါ်လာနိုင်တဲ့ အချိန်ဟာ ခင်ဗျားတို့လက်ထဲ ဟောဒီဆွဲပြားလေး ရောက်တဲ့နေ့ပဲ၊ ဘယ့်နှယ်လဲ၊ သဘောတူနိုင်ပါ့မလား” ဟူ၍ မေးလိုက်လေ၏။
“တူပါပြီကော မောင်ဂီရယ်၊ မောင်ရင့်ဘက်ကသာ တည်ပါစေ” ဟူ၍ ဦးခိုင်မှ ပြောဆိုကာ ၎င်းတို့ နှစ်ယောက်သည် မောင်ဂီ ဆိုသူ လူရွယ်၏ အိမ်မှ ထွက်ခွာသွားလေတော့၏။
တစ်နေ့သ၌ တောရွာလေးတစ်ရွာရှိ သပ်ရပ်စွာ တည်ဆောက်ထားသော ပျဉ်ထောင်နှစ်ထပ်အိမ်လေးဆီသို့ ကတုံးပြောင်ပြောင်နှင့် လူထွားကြီး တစ်ဦးသည် ဦးတည်ကာ လျှောက်လှမ်းလာသည်ကို တွေ့ရလေ၏။ ထိုလူကြီးသည် အိမ်ကြီးအနီးသို့ ရောက်သောအခါ အိမ်၏ အောက်ထပ် ကွပ်ပျစ်ပေါ်တွင် ထိုင်နေသော လူတစ်စုထံသို့ လျှောက်လှမ်းသွားလေ၏။
“အရီးလတ် ဆိုတာ ဟောဒီက ထင်ရဲ့”
“ဟုတ်ပါတယ်ရှင်၊ ကျမ အရီးလတ်ပါပဲ၊ ရှင်က ဘယ်သူများပါလဲရှင်”
“ကျုပ်နာမည် အောင်ပုလို့ ခေါ်တယ်၊ ကျုပ်လာရတဲ့ အကြောင်းကတော့ ခင်ဗျားလည်မှာ ဆွဲထားတဲ့ ဆွဲပြားလေးကို ဝယ်ဖို့ပဲ” ဟူ၍ ခရီးရောက်မဆိုက်တွင်ပင် အောင်ပု ဆိုသူမှ အရီးလတ် ဆိုသူ အမျိုးသမီးအား ပြောလိုက်လေ၏။
ရီး – “ရှင်က တယ်လည်း လိုရင်းဆန်လှချည်လားရှင်”
ပု – “ကျုပ်က လိုရင်းပဲ ပြောတတ်တယ်၊ ပြီးတော့ လိုရင်းလည်း မေးတတ်သေးတယ်၊ ခင်ဗျား ဆွဲပြား ကျုပ်ကို ရောင်းနိုင်မလား”
ရီး – “ရှင့်လေသံကြည့်ရတာ မရောင်းရင် လုယူမယ့် လေသံပဲ၊ ဒီတော့ တစ်ခု သတိပေးချင်ပါတယ်၊ ဟောဒါက ကျမ အိမ်၊ ဟောဒီရွာက ကျမရဲ့ရွာ”
ပု – “တယ်လည်း သတ္တိကောင်းပါလား၊ ကျုပ်က ခင်ဗျားဆွဲပြားကို မလုပါဘူး၊ တန်ရာတန်ကြေးပေးပြီး ဝယ်မှာပါ”
ရီး – “ကျမက မရောင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ကောရှင်”
ထိုသို့ အမျိုးသမီးမှ ပြောလိုက်သည့်အခါ အောင်ပု ဆိုသူမှာ အနီးရှိ လူများအား ကြည့်လိုက်ပြီးနောက် အမျိုးသမီးဘက်သို့ လှည့်ကာ “ကျုပ် ဒီဆွဲပြားလေးအတွက် ငွေတစ်သောင်း ပေးပါမယ်” ဟူ၍ ပြောလိုက်လေ၏။
ထိုအခါ အရီးလတ် ဆိုသူ အမျိုးသမီးမှ “ကျမ အနေနဲ့ မရောင်းနိုင်ပါဘူး” ဟူ၍ ပြောလေရာ အောင်ပု ဆိုသူ ကတုံးပြောင်ပြောင်နှင့် လူမှ “စဉ်းစားပါဦး၊ ကျုပ် နက်ဖြန်ခါ တစ်ခေါက် ထပ်လာခဲ့ပါဦးမယ်” ဟူ၍ ပြောကာ လှည့်ထွက်သွားခဲ့လေတော့၏။
အောင်ပုဆိုသူ ထွက်သွားသည့်အခါတွင် အရီး၏ အနီးတွင် ရှိနေသော ပေါက်ဖော်မှ “အရီးရေ … ကျုပ်ပြောတာ တွေ့တယ် မဟုတ်လားဗျ၊ အခု အောင်ပု ရောက်လာပြီဗျို့၊ သူက အရီးဆီက ဆွဲပြားကို မရ ရတဲ့နည်းနဲ့ ယူမယ့်လူနော့” ဟူ၍ ပြောလေရာ အရီးမှ “မြွေ မြွေချင်း ခြေမြင်ကြတဲ့ သဘောပေါ့ ဟုတ်သလားကွယ့်၊ အရီး အနေနဲ့ကတော့ အဲ့ဒီလူကို မတုန်လှုပ်မိရန်ကော မောင်ပေါက်ဖော်ရယ်” ဟူ၍ ပြန်လည် ပြောဆိုလိုက်လေ၏။
ယင်းနေ့ ညဉ့်အချိန်တွင် အဆိုပါ အိမ်ကြီးဆီမှ သတ်ပုတ်သံများ ပေါ်ထွက်လာခဲ့လေ၏။ အဆိုပါ သတ်ပုတ်သံများကြောင့်ပင် ရွာသူကြီးအပါအဝင် ရွာသူ၊ ရွာသားများမှာ လက်နက်များ စွဲကိုင်လျက် အဆိုပါ အိမ်ကြီးဆီသို့ လာရောက်ခဲ့လေ၏။ ထိုအခါ မျက်နှာများကို အဝတ်စည်းထားသည့် လူငါးယောက်အား ဖမ်းဆီးရလိုက်မိလေတော့၏။
ပေ – “ဒီကလူကတော့ဖြင့် ကိုရင်မောင်လို့ ခေါ်တယ်၊ ကျုပ်ရဲ့ အကိုဆိုလည်းဟုတ်၊ သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့ ဟုတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ပေါ့၊ ဟောဒီတစ်ယောက်ကတော့ဖြင့် ခင်ဗျားတို့ တွေ့ဖူးပြီးသားပါ၊ ကိုရင်မောင်ရဲ့ ညီမပေါ့ဗျာ၊ နာမည်က ရွှေကြည်”
ပါ – “ကိုရင်မောင်က မောင်ပေရဲ့ သူငယ်ချင်းဆိုတော့ ခေသူတော့ ဟုတ်ဟန် မထင်ဘူး”
ရင် – “မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ၊ ကျုပ်ညီ မောင်ပေက ထစ်ခနဲဆို ဘာမှန်းသိတတ်ပေမယ့် ကျုပ်ကတော့ဖြင့် ဘာဆို ဘာမှ မသိတဲ့လူပါဗျ”
ချော – “ဟောဒီက မရွှေကြည်လေးက ကိုရင်မောင့် ညီမလေးဆိုပဲ”
ရင် – “ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ၊ ကျုပ်ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ညီမချောလေးပေါ့ဗျာ”
မိုက် – “ဒါနဲ့ ကိုရင်မောင် ထောင်ကျခဲ့တယ်ဆိုတာ ဘာအမှုနဲ့များလဲဗျ”
ရင် – “ဘာအမှုနဲ့တုန်းဆိုတော့ ထိုးမှုပေါ့ဗျာ”
ပါ – “ထိုးမှု ဟုတ်သလားဗျ၊ ရိုက်မှု မဟုတ်ဘူးလား”
ရင် – “ထိုးမှုမှ ထိုးမှု အစစ်ဗျ၊ ကျုပ်ညီမ ရွှေကြည်ကို ဆွဲလားရမ်းလားလုပ်တဲ့ ခွေးကောင် ပုလိပ်ကို ကျုပ်က ထိုးလိုက်မိတဲ့ အမှုပေါ့ဗျာ၊ အင်း .. အဲ့ဒီပုလိပ်တော့ဖြင့် ထမင်းဝါးတိုင်း ကျုပ်ကို သတိရနေမိမယ်ထင်ပါ့”
ချော – “ကိုယ့်လူက ပုလိပ်ကိုမှ လက်သီးနဲ့ ထိုးခဲ့သကိုးဗျ”
ရင် – “ပုလိပ်မှ မဟုတ်ပါဘူး၊ မိုးပေါ်က သိကြားမင်းကြီးက ကျုပ်ညီမကို လာထိရင်လည်း အဲ့ဒီသိကြား နတ်ပြည် မပြန်နိုင်ဘဲ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဗျား”
မိုက် – “ရွှေကြည်လေးကတော့ဖြင့် အခုလို သိမ့်သိမ့်တုန်အောင် ချစ်တဲ့ အကိုတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာ အတော့်ကို ကံကောင်းတာပဲ၊”
ကြည် – “ဟုတ်ပါတယ် အကိုကြီးတို့ရယ်၊ ရွှေကြည်ဘေးမှာ ကိုကြီး ရှိနေလို့ကတော့ ရွှေကြည် ဘာကိုမှ မကြောက်ဘူး”
ပါ – “ကျုပ်တို့ကိုရောဗျာ”
ကြည် – “အကိုကြီးတို့ကိုလည်း မကြောက်ပါဘူး၊ ရွှေကြည်ကို လာထိကြည့်ပါလား၊ မီးပွင့်သွားမှာပေါ့၊ ဟုတ်တယ်နော် ကိုကြီး” ဟူ၍ ကိုရင်မောင်ဘက်သို့ လှည့်၍ မေးလိုက်လေရာ ကိုရင်မောင် ဆိုသူ၏ မျက်နှာမှာ ပြုံးပြုံးကြီး ဖြစ်သွားလေတော့၏။
ထိုအခိုက်တွင် တံခါးခေါက်သံသည် ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် “လမင်းကြီး ရှိသလား” ဟူသော အသံသည်လည်း တံခါးဆီမှ ထွက်ပေါ်လာလေ၏။ ထိုအခါ ပါလေရာ ဆိုသူမှ “လမင်းကြီး မရှိဘူး၊ ကောင်းကင်က တိမ်ဖုံးနေတယ်” ဟူ၍ လှမ်းကာ ပြောလိုက်လေရာ တံခါးအပြင်မှ “တိမ်ကို နေနဲ့ဖယ်မယ်” ဟူ၍ ပြောလိုက်လေ၏။
ထိုအခါတွင် ကြီးမိုက် ဆိုသူမှ “ပေါက်ဖော်တစ်ယောက်တောင် ရောက်လာပြီပဲ” ဟုဆိုကာ တံခါးဆီသို့ သွား၍ ဖွင့်ပေးလိုက်လေ၏။ ထိုအခါ ပေါက်ဖောက် တစ်ဦးတည်းသာ မဟုတ်ဘဲ အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် လူငယ်တစ်ဦးတို့ကိုပါ တွေ့လိုက်ရလေ၏။
“ကိုပါတို့ရေ …၊ ဟောဒါကတော့ဖြင့် အရီးလတ်လို့ ခေါ်သဗျ၊ ဟော ဟိုကတော့ အရီးလတ်ရဲ့ မြေးလေး ဖရဲသီး ဆိုတာပဲ” ဟူ၍ ပေါက်ဖော်မှ မိတ်ဆက်ပေးလေ၏။ ထိုအခါတွင် ပါလေရာဆိုသူ အပါအဝင် အခြားသော သူများမှ ပြုံးပြကာဖြင့် ပြန်လည် နှုတ်ဆက်ကြလေ၏။
ပါလေရာ ဆိုသူမှ “ပေါက်ဖော်ရေ၊ မင်းရောက်တာနဲ့ အတော်ပဲ ဖြစ်သွားတယ်၊ ငါတို့တွေ ဆင်းတော့မယ်ကွ” ဟူ၍ ပြောလိုက်လေရာ ပေါက်ဖော်မှ နားလည်ဟန် မရှိသော အမူအယာဖြင့် “မျက်စိမှိတ်ပြီး ဆင်းမှာလား ကိုပါရဲ့” ဟူ၍ မေးလိုက်လေ၏။ ထိုအခါ ပါလေရာ ဆိုသူမှ မောင်ပေ ဘက်သို့ တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်း “မျက်စိ မှိတ်စရာ မလိုတော့ဘူး ငါ့ကောင်ရေ၊ ဟောဒီ မောင်ပေက မျက်စိ ဖွင့်ပေးလိမ့်မယ်ကွ” ဟူ၍ ပြောလိုက်လေတော့၏။
ဖော် – “ခင်ဗျားတို့ဟာက ဘယ်လိုတုံးဗျ၊ ကျုပ်ဖြင့် နားမလည်နိုင်တော့ဘူး”
ပါ – “ဒီလို ပေါက်ဖော်ရေ၊ မောင်ပေဆီမှာ ရတနာသိုက်ရဲ့ မြေပုံရှိနေတယ်ကွ၊ ဒါကြောင့် ငါတို့အနေနဲ့ ရတနာသိုက်ဆီကို သွားဖို့ ပြင်ကြတော့မယ်၊ ရတနာသိုက် ဖွင့်မယ့်သော့ကိုတော့ဖြင့် ရတနာသိုက်နားက စောင့်ပြီး ယူရမှာပဲ”
ဖော် – “ကိုပါ ပြောတာ ဒီလိုလားဗျ၊ အခု ကျုပ်တို့က သွားနှင့်မယ်၊ ဦးခိုင်တို့ အုပ်စုနဲ့ မောင်ဂီတို့ ရတနာသိုက်ကို ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ ကျုပ်တို့က သူတို့ဆီက သော့ကို ဖြတ်ခုတ်ပြီး ရတနာသိုက်ကို ဖွင့်ကြမယ်ပေါ့”
ပါ – “အဟုတ်ပဲ ပေါက်ဖော်ရေ၊ ငါတို့ သွားမယ့်ထဲမှာ ဟောဒီက မောင်ပေရယ်၊ ဟောဟိုက ကိုရင်မောင်ရယ်၊ ငါတို့ရယ် သွားကြမှာပဲ”
ဖော် – “ဒါဖြင့် အရီးလတ်တို့ကိုရော”
ပါ – “လူကောင်း နတ်ကောင်းမ ဆိုတာ ဒါမျိုးကို ပြောတာနေမှာပေါ့၊ ကျုပ်တို့ကလည်း ဟောဒီက ရွှေကြည်လေးအတွက်ကို တွေးနေတာ၊ အခု အရီးလတ်တို့ ရောက်လာတော့ အတော် ဖြစ်သွားတာပေါ့”
ရီး – “ငါ့မောင်တို့ကတော့ဖြင့် ဟုတ်နေတာပဲ၊ ပေါက်ဖော်နဲ့ လိုက်တာတုန်းကတော့ကွယ်၊ ရန်ကုန်မှာ မြေးအဘွားနှစ်ယောက်တည်း ခပ်ပျင်းပျင်းနဲ့ နေကြရဦးမယ်လို့ တွေးထားတာ၊ အခုတော့ ရွှေကြည်ဆိုတဲ့ သမီးချောလေးပါ အဖော်ရပြီပေါ့ကွယ်”
သီး – “အဘွား .. ဒါဆို ကျုပ်လည်း သူတို့နဲ့ လိုက်သွားချင်တယ်ဗျာ၊ အဘွားမှာ ဟိုအမကြီးနဲ့ အဖော်ရပြီပဲ”
ရီး – “မြေးလေး ကလည်းကွယ်၊ တောဆိုတာ အန္တရာယ်များတယ်ကွယ့်၊ လိုက်မသွားချင်စမ်းပါနဲ့ မြေးလေးရယ်”
သီး – “အဘွားကလည်းဗျာ၊ ဟိုအကိုကြီးတွေလည်း ပါတာပဲဗျ”
ချော – “အရီးရေ၊ အရီးရဲ့ မြေးလေး လိုက်ချင်သပဆိုရင်လည်း ထည့်လိုက်ပေါ့ဗျာ၊ ယောက်ျားဆိုတာ စွန့်စားဖူးမှ တဲ့ဗျ”
ဤသို့ဖြင့် ဖရဲသီး ဆိုသူ လူငယ်သည် ၎င်းတို့နှင့်အတူ ရတနာသိုက် ရှာဖွေရန်အတွက် လိုက်သွားရန် ၎င်း၏ အဘွားဖြစ်သူ အရီးလတ် ဆိုသူ အမျိုးသမီးမှ ခွင့်ပေးလိုက်လေ၏။ ပြီးနောက်တွင် အရီးလတ် ဆိုသူ အမျိုးသမီးမှ ၎င်း၏ ဆွဲပြားလေးအား ၎င်း၏ မြေးဖြစ်သော ဖရဲသီး၏ လည်တွင် ဆွဲပေးလိုက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောလိုက်လေ၏။
ထို့နောက်တွင်ကား ပါလေရာ၊ ကြီးမိုက်၊ ကိုချော၊ မောင်ပေ၊ ကိုရင်မောင်၊ ပေါက်ဖော်နှင့် ဖရဲသီးတို့သည် ၎င်းတို့ သွားမည့် ခရီးအတွက် တိုင်ပင်နေကြလေတော့၏။
လာခဲ့ကြ… လာခဲ့ကြ… အချောင်ရခြင်တဲ့ လောဘသမားတွေ… လာခဲ့စမ်း… သူဋ္ဌေး ဇောက်ထိုးကို အသေခိုင်းထားပေမယ့် သူရဲဇောက်ထိုးရှိသေးတယ်နော်….
ဒီကမှာ သရဲအဖြစ်နဲ့ ရှိနေဒယ်ဒဲ့ဗျို့ …
လာယူရင် ခြောက်လွှတ်လိမ့်မယ် … ကွိ .. ကွိ
ရှာပုံတော်7ကို လည်းစောင့်မျှော်နေပါတယ်
အဖွဲ့2ဖွဲ့ ဘယ်လိုများ ကတုံးပေါ်ကို ထိပ်ကွက် မလည်းဆိုတာ
ရှာပုံတော် 6ကို လည်းစောင့်မျှော်နေပါတယ် လို့ပြောချင်တာ
အဲဒါကြီးက နောက်ဆုံးတော့ ဂျပန်စက္ကူတွေဖြစ်နေရော ညွှတ် ညွှတ် ညွှတ်
အင်း ကျုပ်လက်ထဲက မြေပုံ ကလဲ တယ်အရေးကြီးတာဘဲ ဆိုတော့
ကျုပ် ကို စောင့်ရှောင့်ပေးဖို့ ဘော်ဒီကပ် မဒီကည ၂ဘွေလောက်
ဆိုရင် အကုန်ကြိုက်တဲ့ ကြောင်လေး
ရွှေကြည်တောင် မကြိုက်ရဲအောင် ပါပဲလားဗျို့။
အနော့်ဘွ ကိုဂီနဲ့မှရေစက်ဆုံရတယ်လို့ ဟင့်
အမ မပန်ပန် ခညာ့ …
အဟဲ … အထက်က ကိစ္စအတွက်တော့ ..
စိတ်ဆိုးတော် မမူပါနဲ့ ခညာ့လို့ တောင်းပန်ပါဒယ် ခည ..
ကိုဂီသာ သူ့မေးကွဲရန်ရှာမှာကြောက်ရမှာ ဟိ
ဂိုက်တူဆိုက်တူ အမွှာညီအမ အန်တီပဒုမ္မာနဲ့အန်တီမမ ကို မမေ့နဲ့နော်။
ရွာသူားများကို ပန်ကြားခြင်းမှာ ခွင့်မပေးခဲ့ရလို့။
တွေ့ဒယ်မို့လား မိုက်တာဒွေ မိုက်တာဒွေ
ရဒါနာတွေ ယူပြီးမှ ရွှေကြည်လေးအတွက်
ကိုကြီးဂတိတည်ရမယ်နော်။ အရီးအတွက်စိတ်ချအရီးကိုထိလို့ကတော့ ဟွင်း ဟွင်း။
ဒီနယ်မှာ သတင်းကြီးလှသည် မင်းသမီးလေး ပန်ပန်
အဆိုရော အကရော ရုပ်ချောသဘောညီ အလှဆုံးဖြစ်နေပြီ
မမနိုရာလုပ်မှပဲ အနော်လည်း ရွှေသုန္ဒရီဖြစ်သွားတော့တယ်
အင်း….. ရွှေသုန္ဒဂီရဲ့ နှမ ရွှေသုန္ဒရီပေ့ါ ဟိ
တောတွေ တောင်တွေ မြစ်တွေချောင်းတွေ ကျော်ရမှာပေါ့နော်
ဟိုက်ရှပါး …….. နံပါတ် (၅) တောင်ရောက်နေပါပေ့ါလား ……. မန့်ထားမယ် ပြီးရင်ဖတ်မယ် ဒါမျိုးဇာတ်လမ်းတွေက နည်းနည်းလေးခေါင်းသုံးရတယ် ….. စာဖတ်နည်းတဲ့ မမတို့လိုလူတွေအတွက်ပေ့ါလေ ………
အံမယ် ဖြဲမလည်ပင်းမှာ ဆွဲပေးထားတယ်ဆိုတော့ .. လောလာဆယ် သူက … တန်ဖိုးကြီးနေသူပေါ့ …
အရီး နားမှာ ဖရဲ နဲ့ ရွှေကြည် ထားပေးထားတယ်။
ထွက်ပြေး မသွားကြ နဲ့ဦး။
အရီးရဲ့ ဖြဲလေး ကို အန္တရာယ်ပေးကြ သူတွေ ကို သတိပေးပါရစေ။
သူက အဆိပ်ဖရဲ နော်။
ရွှေကြည်လေး ကိုတော့ လေလုံ တဲ့ မုန့်ပုံး လေးထဲ ထည့်ထားမယ်။
ကြောင်ရန် ကလွတ်အောင်လို့။ :-)
ရတနာသိုက် ရှာပုံတော် ၀တ္ထုကြီးထဲ ပါခွင့်ရတာ
အရေးအသားကလည်း တကယ့် မင်းမြတ်သူရတို့ မြတ်ထွန်းသစ်တို့ ရေးသလိုပဲဗျ..။
နောက်လာမယ့် အပိုင်းတွေလည်း စောင့်ဖတ်ပါမယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း…။
မင်းသိင်္ခ..ရဲ့ ….၀တ္ထု.တွေကိ်ုတောင် ပြန်..လွမ်းလာပြိ..ဗျို့ ..။
တားတား…… တို့ .ဖတ်ဖို့ ကြိုးစားပမ်းစားရေးပေနေတဲ့ ဦးကို..ကျေးကျေးဘာ..ဂျ ။
ဦးရဲ့ ဝတ္ထုကြီး… စာအုပ်ထုတ်တဲ့ အခါ… အားပေးသူတွေများမှာ..သေချာတယ် ။
အောင်မြင်မှု အထိမ်းအမှတ်..အဖြစ်…တားတားကို..ဂျယ်လီ ၀ယ်ကျွေးနော်..။